Siminaar lagu baranayay Gowraca Sharciga ah oo ay Wilaayada Islaamiga Sh/Dhexe u qabatay Kawaanlayda iyo ganacsatada Hilibka magaalada Jowhar “Warbixin”. | Halganka Online
Siminaar lagu baranayay Gowraca Sharciga ah oo ay Wilaayada Islaamiga Sh/Dhexe u qabatay Kawaanlayda iyo ganacsatada Hilibka magaalada Jowhar “Warbixin”.
Wilaayada islaamiga Xarakada Shabaabul Mujaahidiin gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa soo gaba gabaysay Dowro Sharci ah oo loo qabtay Ganacsatada Hilibka ku Iibiya suuqyada magaalada Jowhar iyo Kawaanleyda gobalka.
Dowradan Sharciga ah oo socotay muddo 4 Maalmood ah waxaa loo qabtay 40 qof oo isugu jiray ganacsatada Hilibka,Kawaanleyda iyo ganacsatada ka Baayac Mushtara xoolaha qaybahooda kala gedisan.
Siminaarka Islaamiga ah oo shalay gelinkii dambe lagusoo xiray magaalada Jowhar waxaa intii uu socday Duruus ka bixinayay Culimaa’udiin aqoon u leh Gowraca sharciga islaamka waafaqsan iyo madax katirsan wilaayada islaamiga Gobalka Shabeelaha dhexe.
Saraakiisha Wilaayada islaamiga ah iyo culimada Duruusta ka bixinayay Siminaarka waxay dadkii kasoo qayb galay u sharexeen cuquubada ka dhalan karta hadii wax loo Gowraco qaab aan waafaqsanayn shareecada Islaamka.
Waaliga magaalada Jowhar Axmed Maxamed Sheekh “Imaamka” oo khodbad ka jeediyay gaba gabadii Siminaarka ama Dowrada Sharciga ah ayaa u balan qaaday ganacsatada xoolaha in ay heli doonaan daryeel dhanka Caafimaadka ah oo lagu koontaroolayo xoolaha lakeeno Sayladaha xoolaha ee gobalka.
Sheekh Imaamka wuxuu ugu baaqay ganacsatada Hilibka in ganacsigooda ay alle uga baqaan oo ay ka ilaaliyaan xaaraanta sida iyagoo suuqyada Hilibka keena xoola Bakhtiye iyo kuwa aan qaab sharci ah loo Gowracin.
Sheekha oo arrimahaasi ka hadlayay wuxuu yidhi “walaalayaal waxaad tihiin dad Bulshada shaqa weyn u haya, waxaad iibisaan Hilib Bulshada magaalada aad ugu baahantahay waxaa waajib idinku ah in aad wax xalaal ah suuqa keensataan,taajirka Saadiqa ah Manzilo wanaagsan ayuu aakhiro alle agtiisa ku leeyahay ka wilaayo ahaan waxaan balan qaadaynaa in aan idinka kaalmayno caqabadaha idin haysta”.
Ganacsatada Hilibka iyo Kawaanlayda ayaa Wilaayada Islaamiga ah ka codsaday in ay wax ka qabto Nadaafad darada ka jirta magaalada Jowhar si ay u hagaajiyaan ganacsigooda iyagoo ka amba qaadaya Duruustii ay ku barteen Dowrada Sharciga ah ee loo qabtay.
Gaba gabadii Dowradii shalay kusoo dhamaatay Jowhar waxaa la doortay Gudoomiyaha Kawaanlayda waxaana loo magacaabay Nuur Muudeey Cabdi oo in caan ka ah Suuqa Hilibka magaalada Jowhar.
Waa Markii ugu horaysay oo ay Wilaayada islaamiga Shabeelaha dhexe Kawaanlayda uqabto Dowro sharci ah oo ku aadan Gowraca shariga ah waxaa meesha ka bixi doona shakiga ay dadka qaar ka qabeen in suuqyada hilika la keeno Hilib aan lagusoo login Gowrac Xalaal ah.
« Ma U Dabaal Dagnaa Mawlidka Mise‏!! Sheykh Xasan Daahir “Towxiidkii iyo Sunadii Nabiga ayay diidanyihiin markaas ayay leeyihiin waxaan Xusaynaa dhalashadiisa waa kuwa Bidco xoola uga cunaya Shacabka masaakiinta ah”. »